विपद् व्यवस्थापनमा हामी सधै कच्चा किन ? - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	विपद् व्यवस्थापनमा हामी सधै कच्चा किन ?
by Tanahu Awaj 2nd July 2020 2nd July 2020
2nd July 2020 2nd July 2020 75 views
दक्षिण एशियामा नै पहिलो पटक विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाउने नेपाल अझैपनि यसमा कच्चा नै रहेको छ । यो आरोप होइन, यथार्थ हो जुन हामीले भोग्दै र देख्दै आएका छौ । यसका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्ने र हाम्रा कच्चापनका बारेमा यो आलेखमा चर्चा गर्ने जमर्काे गरेको छु । त्यस भन्दा पहिले म विपद् व्यवस्थापनमा कस्तो दृष्टिकोण वा योजना आवश्यक र तयारी चाहिन्छ भन्ने विषयमा बुझ्न सजिलो हुने एउटा छोटो ऐतिहाशिक कथा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
हिन्दीमा भएको उक्त कथामा रामा भन्ने एउटा पात्र छ, जो आफ्नो जीवनमा आउने हरेक समस्यालाई बडो सुझबुझ पूर्ण ढंगले समाधान गर्छ, चाहे समस्या अत्यन्तै कठिन किन नहोस् । कथा यस प्रकार छ ।
रामालाई एउटा चुनौती आइलाग्छ कि सय गज जमिन माथी गएर कुनै प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्ने । दरवारमा सल्लाहकारको रुपमा रहेका उसलाई महारानी र प्रधानमन्त्री पटक्कै रुचाउँदैनन । यसैको षड्यन्त्र स्वरुप उसलाई जमिन माथि सय गज गएर प्रश्नको उत्तर खोजी गर्न भनिएको हुन्छ । कसरी आफुलाई लगाइएको काम गर्ने भनेर उ चिन्तामा थियो त्यस्तैमा एउटा बालक गुलेली लिएर उ भए ठाउँ आउँछ र गुलेली देखाउँदै भन्छ ‘हजुरले भने झै मन लगाएर पढेकाले मलाई बुबाले दिनु भएको पुरस्कार हो यो ।’
तिक्ष्ण बुद्धिको उसलाई गुलेली देख्नासाथ आकाशमा उड्ने जुक्ती फुर्छ र आफुलाई मट्याङ्ग्रालाई जसरी उडाउन सक्ने गुलेली तयार पार्छ । अनि आफु आकाशबाट खस्ने ठाउँमा बाक्लो लुगाहरु विछ्याउँछ । तर उसलाई के थाहा छ भने रानी र प्रधानमन्त्री आफ्नो विपक्षमा छन् र उनीहरुले आफ्ना विरुद्ध कुनै षड्यन्त्र गर्न सक्छन् । तसर्थ उसले झोलामा प्यारासुटको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने कपडा पनि राख्छ । जब उ गुलेलीको सहायताले आकाशमा पुग्छ तब देख्छ, आफुले बाक्लो लुगा विछ्याएको ठाउँमा त तिखा भालाहरु गाडेर राखिएका छन् । तुरुन्त झोलाबाट कपडा झिक्छ र त्यसको दुई छेउमा हातले समाएर आरामले सुरक्षित जमिनमा ओर्लन्छ ।
कथा अरुपनि छ तर मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको सन्दर्भमा कथाको यही अंश पर्याप्त छ । संकट व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारी र देखाउनु पर्ने चातुर्यको शायद सबैभन्दा सटिक सन्देश यो कथाले बोकेको छ । खस्ने ठाउँमा बाक्ला कपडा विछ्याएको छु भनेर बैकल्पिक व्यवस्था नगरेको भए उसको जीवनलिला त्यहीँ समाप्त हुन्थ्यो । तर उसले सम्भाव्य जोखिम जुन रानी र प्रधानमन्त्रीका कारण उसलाई थियो, त्यसको आँकलन गरेर बैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्दा आफुलाई मात्र बचाएको छैन कथामा राज्यको अस्तित्व नै बचाएको छ । तर हाम्रो राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा यस्तो दुरदृष्टि र चातुर्यको अभाव हुँदा हामी नेपालीले संधै दुःख र हण्डर खाएका छौं । सयौं नेपाली नागरिकले वर्षेनी अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । कति आमा बाबुको कोख रित्तिएको
छ । कति महिलाको सिंदुर पुुछिएको छ । कति बालबालिका टुहुरा भएका छन् अनि कति नागरिक घरबार विहिन भएका छन् । एउटा सामान्य नागरिकको रुपमा मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ, आखिर हाम्रो राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व संकट व्यवस्थापनमा सधैं अपरिपक्व किन ? किन कहिल्यै हामीले पहिले भोगका विभिन्न खालका संकट र विपद्हरुबाट सिक्न नसकेको र त्यसबाट पार पाउनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्न नसकेको ?
संकट समाधानका विभिन्न उपायहरु हुन सक्छन् र संकटको व्यवस्थापनमा कुनै एक मात्र उपायको पखाईमा बस्ने वा त्यसको मात्र अवलम्बन गर्ने हो भने हामीले संकटबाट पार नपाउन सक्छौं भन्ने कुरा हामीले कहिले सिक्ने होला ? हाम्रा पुर्खाहरुले बनाएको आगो लागेपछि कुवा खन्ने भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न खालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आमनागरिकलाई दिने भनेकोे त हण्डर र ठक्कर नै हो जुन हामीले खाइरहेका छौं । कोभिड–१९ को संक्रमण चीनमा देखिए पछि कै कुरा गरौं न । चीनमा संक्रमणले भयावह रुप लिइसकेको थियो र युरोप तथा अमेरिकामा पनि फाट्टफुट्ट देखिन थालेको थियो । नेपालमा केही सांसद तथा अन्य बुद्धिजीवि र आमसर्वसाधारणले आवश्यक सावधानी अपनाउन तथा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रिको जोहो गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । तर हाम्रा स्वास्थ्य मन्त्री भने नेपालमा कोरोना आउनै नसक्ने भनेर आमअग्रह माथि मजाक गरिरहेका थिए । न त कोरोना परिक्षणका लागि आवश्यक हुने स्वास्थ्य सामग्रि जोहो गर्ने तर्फ सरकार लाग्यो नत आवश्यक सावधानी अपनाउने तिर । बरु चीन लगाएत विश्वले कोरोना महामारीबाट वच्न सावधानीका उपाए अपनाउन थालेको भन्नेहरुलाई मन्त्रीले जवाफ फर्काउन थाले, ‘चीनमा पानी प¥यो भन्दैमा नेपालमा छाता ओढ्नु पर्छ भन्ने मानसिकता
राम्रो होइन ।’ उनको आशय थियो, हामीले कोरोनासंग डराउनु पर्ने र सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । पर्यटनमन्त्री भन्दै थिए, नेपाल कोरोना फ्रि जोन हो । कोरोना संक्रमण पछि पनि मन्त्रीको बचकना तर्क सकिएको थिएन, उनी भन्दै थिए नेपालमा कोरोना संक्रमित दुइसय भन्दा बढी हुन दिइने छैन । आजका मितिमा कोरोना संक्रमितको संख्या कति पुगेको छ, त्यो हेरेपुग्छ, मन्त्रीको बचकनापन ।
त्यसैले न त उनले आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रि जम्मा पारे न त समयमा नै । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने उखान राम्रैसंग चरितार्थ गरे उनले । कोरोनाको प्रभाव अरु धेरै पर्नसक्छ, त्यसैले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रि जोहो गरिराख्नु पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नै भएन सायद सरकार र यसका मन्त्रीलाई । आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रि ल्याउने कुरा त छोडौ ल्याइएका पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने ल्याए भने बजार मूल्य भन्दा अत्यन्त महंगो ल्याएर संकटलाई कमाउने अवसरको रुपमा लिए । बचकना तर्क र व्यवहारको परिणाम के भयो अहिले हामीले देखिरहेका र भोगि रहेका छौं ।
सलह नेपालमा आउनै सक्दैन भनेर एकथरी विज्ञ भनाउँदाहरुले घोषणा गरे । तर त्यसको केही दिनमै नेपालमा सलह आतंक सुरु भएको छ । यी र यस्ता संकट व्यवस्थापनमा हाम्रो नेतृत्वले विवेक पु¥याउन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । आखिर हामी कहिलेसम्म यस्तो काममा अपरिपक्व र उदासिन रहने ?
सेवाग्राहीसंग अदालतले गर्ने व्यवहार
चर्चामा कांग्रेस युवा नेता
फैसला सम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था